जनप्रतिनिधिका ७ महिना, कुन महानगरमा के भयो ? – Puleso
३१ चैत्र, २०७७, मंगलबार
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ जनप्रतिनिधिका ७ महिना, कुन महानगरमा के भयो ?
जनप्रतिनिधिका ७ महिना, कुन महानगरमा के भयो ?
पुलेसो १५ पुस, २०७८, बिहीबार १३:२३
काठमाडौँ महानगरको सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी समेत पूर्ण नसकेको भन्दै मेयरको विषयमा निकै आलोचना भईरहेको छ । पछिल्लो केहि दिन यता काठमाडौँमा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको बिसयमा विवाद भएको छ । विवादमा महानगरका मेयर र उपमेयर बिचमै मतभेत देखिए पछी विवाद झन्झन् बढ्दै गएको हो । रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा क्रंक्रिट प्रयोग गरिएपछि सम्पदाविद्हरुले चर्को विरोध गर्दै आएक छन्
साना योजनामै अल्झियो पोखरा।
मुलुककै ठुलो महानगर पोखरा लेखनाथले जनप्रतिनिधिको नेतृत्व पाएको सात महिनामा विकास बजेट एक प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सठक मर्मत, कल्भर्ट, स्ल्याब, ह्युमपाईप र तारजाली लगाउनमै स्रोत र जनशक्ति बढी परिचालन आएको छ ।
शैली फेरिएन वीरगन्जको
पर्सा आर्थिक नगरी भए पनि वीरगन्ज खुला नाला, धुवाँधुलो, अव्यवस्थित सहरीकरण, ट्राफिक जाम र प्रदुषणका कारण बदनाम छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि यो पहिचान सुध्रिने स्थानीयको आस थियो । तर उनीहरुको कार्यशैली पहिलेकै भन्दा अलिकति पनि फरक छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
उठेन फोहोर, हटेन धुलो
चितवन, स्थानीय निर्वाचनताका भरतपुर महानगरलार्य स्मार्ट सिटी बनाउने नारा सबैभन्दा बढी घन्कियो । तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुरसार छैन । स्मार्ट सिटी त परै, मुख्य भागमा सरसफाईसम्म गरिएको छैन ।। जनप्रतिनिधि आएको ५ महिना बित्न लाग्दा महानगरमा बेथिती कायमै छ ।
लय पक्रँदै विराटनगर
मोरङ । जनप्रतिनिधि आएपछि विराटनगर महानगरमा विकासका कामले गति लिएको छ । स्थानीयले परिवर्तनको अनुभुति गर्न थालेका छन् । विराटनगर ४ का रामप्रसाद खड्काले जनप्रतिनिधि आएपछि विधुत् पोलको बत्ती बिग्रँदा मर्मतका लागि महिनौँ प्रतीक्षा गनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको बताए ।
उनले भने, अचेल कर्मचारी आफै आएर मर्मत गर्छन्, सडकमा देखिने खाल्डा तत्काल परिन थालेका छन् ।